Vavengi vaJesu Vanoedza Kumubata (Mateu 22) | Upenyu hwaJesu
Jesu Anoita Kuti Mazano Evavengi Vake Ashaye Basa
MATEU 22:15-40 MAKO 12:13-34 RUKA 20:20-40
ZVAKESARI KUNA KESARI
VANHU VACHAROORANA HERE PAKUMUTSWA?
MITEMO MIKURU PANE YOSE
Vatungamiriri vechitendero vanovenga Jesu vakashatirwa. Achangobva kurondedzera mifananidzo yafumura uipi hwavo. Iye zvino vaFarisi vanorangana kuti vatsvage pekumubatira. Vanoedza kuita kuti ataure chimwe chinhu chavangashandisa kumumhan’arira kuna gavhuna weRoma, saka vanobhadhara vamwe vadzidzi vavo kuti vaende kwaari.—Ruka 6:7.
Vanosvika voti: “Mudzidzisi, tinoziva kuti munotaura uye munodzidzisa zvakarurama uye hamusaruri, asi munodzidzisa nzira yaMwari maererano nechokwadi: Zvinobvumirwa nomutemo here kuti titere mutero kuna Kesari kana kuti kwete?” (Ruka 20:21, 22) Jesu haanyengedzwi nemashoko avo ekunyepedzera kumurumbidza, nekuti ari kuziva kuti vari kuda kumubata kumeso. Kana akati ‘Kwete hazvibvumirwe kubhadhara mutero,’ anogona kubva apiwa mhosva yekuda kupandukira hurumende yeRoma. Asi kana akati ‘Hongu zvinobvumirwa,’ vanhu vasingade kuva pasi peRoma vanogona kutadza kumunzwisisa vobva vamuita kanyama-kanyama. Saka anovapindura sei?
Jesu anopindura kuti: “Munondiedzerei, imi vanyengeri? Ndiratidzei mari inoterwa.” Vanouya kwaari nedhinari, obva ati kwavari: “Mufananidzo nemashoko aya akanyorwa ndezvaani?” Vanopindura kuti: “NdezvaKesari.” Jesu anobva avapindura neunyanzvi achiti: “Naizvozvo, dzorerai zvinhu zvaKesari kuna Kesari, asi zvinhu zvaMwari kuna Mwari.”—Mateu 22:18-21.
Varume ava vanoshaya remuromo nemhinduro yeuchenjeri yavapiwa naJesu, vobva vangoenda. Asi pane vamwe vachiri kuda kumuwanira mhosva. Zano revaFarisi parinokundikana, vamwe vatungamiriri verimwe boka rechitendero vanobva vauya kuna Jesu.
VaSadhusi, avo vanoti hakuna rumuko, vanomubvunza mubvunzo une chekuita nerumuko uye kugara mukadzi nhaka. Vanoti: “Mudzidzisi, Mosesi akati, ‘Kana murume akafa asina kuva nevana, munun’una wake anofanira kuroora mudzimai wake omutsira mukoma wake vana.’ Zvino kwaiva nevatevedzani vanomwe vaiva nesu; wokutanga akaroora, akazofa asina vana, akasiyira munun’una wake mudzimai wake. Zvakafanana zvakaitikawo kune wechipiri nowechitatu, kusvikira vose vanomwe vapera. Pakupedzisira mukadzi wacho akafa. Naizvozvo, pakumuka, achava mudzimai woupi pavanomwe vacho? Nokuti vose vakamuwana.”—Mateu 22:24-28.
Achishandisa zvakanyorwa naMosesi, izvo zvinotendwa nevaSadhusi, Jesu anovapindura achiti: “Ichi handicho chikonzero nei makarasika here, kusaziva kwenyu Magwaro kana simba raMwari? Nokuti pavanomuka kubva kuvakafa, varume havaroori uyewo vakadzi havaroorwi, asi vanenge vakaita sengirozi dziri kumatenga. Asi pamusoro pevakafa, kuti vanomutswa, hamuna kuverenga here mubhuku raMosesi, munyaya yegwenzi reminzwa, matauriro akaita Mwari kwaari kuti, ‘Ndini Mwari waAbrahamu naMwari waIsaka naMwari waJakobho’? Iye haasi Mwari wevakafa, asi wevapenyu. Makarasika chaizvo.” (Mako 12:24-27; Eksodho 3:1-6) Ruzhinji rwevanhu runoshamiswa chaizvo nemhinduro iyoyo.
VaFarisi nevaSadhusi vatadza kuwanira Jesu mhosva, saka vanobatana kuti vamuedze zvekare. Mumwe munyori anomubvunza kuti: “Mudzidzisi, ndoupi murayiro mukuru paMitemo yose?”—Mateu 22:36.
Jesu anomupindura kuti: “Wokutanga ndouyu, ‘Inzwa, haiwa iwe Israeri, Jehovha Mwari wedu ndiJehovha mumwe chete, ida Jehovha Mwari wako nomwoyo wako wose nomweya wako wose nepfungwa dzako dzose uye nesimba rako rose.’ Wechipiri ndouyu, ‘Ida muvakidzani wako sezvaunozviita.’ Hapana mumwe murayiro mukuru kupfuura iyi.”—Mako 12:29-31.
Paanonzwa mhinduro iyi munyori uyu anoti: “Mudzidzisi, mataura zvakanaka maererano nechokwadi chokuti, ‘Iye ndiye Mumwe chete, uye hakuna mumwe kunze Kwake’; uye uku kumuda nomwoyo wako wose nokunzwisisa kwako kwose nesimba rako rose uye uku kuda muvakidzani wako sezvaunozviita kunokosha kupfuura zvinopiwa zvose zvakakwana zvinopiswa nezvibayiro.” Achiona kuti munyori uyu apindura neungwaru, Jesu anomuudza kuti: “Hausi kure noumambo hwaMwari.”—Mako 12:32-34.
Kubva musi waNisani 9 kusvika 11, Jesu anga achidzidzisa patemberi. Vamwe vanhu vakadai semunyori uyu, vafadzwa nezvaari kudzidzisa. Asi kana vari vatungamiriri vechitendero, hapasisina kana nemumwe wavo “achine ushingi hwokumubvunza.”
VaFarisi vanoedza kuitei kuti vabate Jesu uye vanobudirira here?
Jesu anoita sei kuti zano revaSadhusi rishaye basa?
Paanenge achipindura mubvunzo wemumwe munyori, Jesu anoti mitemo ipi inokosha kupfuura imwe yose?
Jesu paakataura nezvekuti vanenge vamutswa “havazoroori kana kuroorwa,” aitaura nezverumuko rwepanyika here?
Chii chinoitika kwatiri patinofa? Tichazomboona hama dzedu dzakafa here?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Jesu Anoita Kuti Mazano Evavengi Vake Ashaye Basa